सिमपानी जादै गरेको जीप दुर्घटना, तीनको मृत्यु, १९ जना घाइते – Nep Stok
सिमपानी जादै गरेको जीप दुर्घटना, तीनको मृत्यु, १९ जना घाइते
मंग्सिर २७, २०७८ सोमबार 269
काठमाडौं । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ सिरखोला नजिकै जीप दुर्घटना हुँँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा परेर कपुरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का ४८ बर्षिय प्रेम प्रकाश शर्मा, सोही गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का सौनी घर्ती र लालमती खड्का रहेको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा परी १९ जना घाईते भएका छन् ।
घाईते मध्ये छ जनालाई थप उपचारका लागि नेपालगन्ज रिफर गरिएको छ भने १३ जनाको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भईरहेको छ । तुलसीपुरबाट सल्यानको सिमपानी जादै गरेको रा १ ज ४३८ नम्बरको जिप तुलसीपुर ३ सिरखोला नजिक आईतवार अपरान्ह चार बजे दुर्घटनामा परेको ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ ।
घाइते हुनेमा सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका ४ धनबाङका २२ वर्र्षीया लक्ष्मी बुढा, गाउँपालिका ३ का ४५ देवा चापागाई,२७ वर्षीय भुपबहादुर थापा,२२ धर्म थापा,उहाँको छोरा पाँच वर्षीया दिपेश थापा, ४ किमिरेचौर बस्ने ३६ वर्र्षीय डम्बरबहादुर बुढाथोकी, १८ वर्र्षीया अनिता पुन १ बस्ने आरति पुन, १९ वर्र्षीया रमिता बस्नेत लगायत रहेको प्रहरीले जनाएको छ । जिप चालक भने फरार रहेको प्रहरीले बताएको छ । फोटो फाईल
Prevज्वाइँ जेठान सम्बन्ध पर्ने ४६ वर्षका पदमबहादुर राईले किन यसो गरे ?
Nextभोलि मंसिर २८ गते विधालय, यातायात सम्पूर्ण बन्द रहने ? सरकार बाट आयो एस्तो आदेस
कुमारी बैङ्कको सिस्टम ह्याक गर्ने चेतावनी